သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီးလက်ရာဆန်းများ – Cele Channel
Posted on January 26, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
ပန်းချီဆရာ Ramon Bruin , Allessandro Diddi နဲ့ Fredo တို့ ပူးပေါင်းပြီး အလွန်လက်ရာမြောက်တဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီတွေကို ဖန်တီးပြသွားတာ တကယ်ကိုအသက်ရှုမှားလောက်တယ်။ ခဲတံ၊ စာရွက်ကိုသာအသုံးပြုပြီး သူတို့ဆွဲပြသွားတဲ့ လက်ရာတွေကို ခံစားကြည့်ပါဦး ! ဒီထက့်အများကြီးပိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်လေးကိုအလင်းပြလိုက်ပါတယ်။
မြွေဟောက်အကောင် တစ်ထောင်မွေးမြူထားတဲ့ မြွေဟောက်ဘုရင်မ(Cobra Queen)
Posted on January 11, 2018 Author Myo Min Htet
တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြွေဟောက်ဘုရင်မဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ Cobra Queen လို့ခေါ်ကြ၊လူသိများရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ မြွေတွေ အများကြီး မွေးမြူထားလို့ပါ။သူမရဲ့ နာမည် ကတော့ Hu Xiaoxia ပါ။Hu Xiaoxia ဟာ Chongqing ဆိုတဲ့ မြို့မှာ ကိုယ်ပိုင်မြွေသားဖောက် မွေးမြူထားတဲ့ ခြံတစ်ခြံ ပိုင်ဆိုင် ထားသူပါ။ အဲ့ဒီမှာ မြွေတွေ အများကြီးကို မွေးမြူစောင့်ရှောက်ထားတာပါ။မြွေတွေကို (၂၀၁၄) တည်းက မွေးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကောင်ရေ တစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီး သင်ယူလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူမမွေးမြူထားတဲ့ မြွေတွေက အမျိုးအစား တစ်ခု တည်း မဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးအစား မျိုးစုံဖြစ်ပြီး မြွေဟောက်လည်း ပါပါတယ်။မြွေတွေ မွေးထားတဲ့ အခန်းကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ သူမရဲ့ တစ်နေ့တာ မနက်ခင်းကို […]
Police Tero အသင်းအတွက်ခြေစမ်းပွဲ (၅) ပွဲမှာ (၄)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ အောင်သူ
Posted on January 29, 2018 Author Myo Min Htet
Toyota Thai League အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Police Tero အသင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အောင်သူအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ ခြေစမ်းပွဲ (၅) ပွဲမှာ (၄) ဂိုး သွင်းယူပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်သူ့အနေနဲ့ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့က Suwon အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ အဖွင့်ဂိုးကို သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Suwon အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ K League (2) မှာ အဆင့် (၆)ရရှိထားခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းလိဂ်ဝမ်းအနေနဲ့လည်း လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ (၂) ရက်နေ့မှာ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးပွဲမှာ မြန်မာကစားသမားနှစ်ယောက် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကတော့ အောင်သူပါဝင်တဲ့ Police Tero အသင်းနဲ့ နန္ဒလင်းကျော်ချစ်ပါဝင်တဲ့ PT Prachuap အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ပဲ […]
ထူးထူးဆန်းဆန်း မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာ အိပ်မက်များလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။တကယ်ကြီးပါဗျာ။ကျောက်တန်းကနေ ၉. မိုင်ခွဲဝင်ရသေးတယ်။ရွာနာမည်က. ဝဲကြီးရွာ တဲ့။ကဗျာမဆန်ပေမဲ့ ပနံရတဲ့ရွာပေါ့ ။အိမ်တိုင်းမှာအမှိုက်အိတ်လေးတွေ ရှိသလို လမ်းဘေးမှာလဲ အမှိုက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ ထွက်လာတဲ့အမှိုက်ကို စွန့်ပစ်ဘို့ စနစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုက ရွာရဲ့အဆင့်အတန်းပဲ။အမှိုက်ကင်းစင်ဘို့ငွေကုန်စရာမလိုပါဘူး။စည်းကမ်းရိရင် ရပြီ။ညီညွတ်ကြရင် ရပြီ။မြန်မာပြည်က ရွာတိုင်း၊ရပ်ကွက်တိုင်း ဒီလိုအမှိုက်ကင်းစင်ဘို့ ဘာတွေများ လိုအပ်နေပါလိမ့်။ နိုင်ဝင်း(မင်းဥက္ကာ) ထံမှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။ [email protected]
အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲကို MEP မှာကျင်းပပြုလုပ်မည်